Pet Chipikiri Clippers Vagadziri & Vatengesi | China Pet Chipikiri Zvipikiri Fekitori
Cat Claw Chipikiri Chipikiri
1. Makara akasimba eiyi katsi nzwara yezvipikiri akagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro, ine simba rakaringana rekucheka nzara dzekatsi yako nekucheka kamwe chete.
2. Katsi inocheka nzara clipper ine dziviriro rinoita kuti udzivise njodzi yekukuvara netsaona.
3. Iyo katsi inocheka nzara clipper inoratidzira yakasununguka, nyore kubata, kusatsvedza, ergonomic handles izvo zvinogara zvakachengeteka munzvimbo mumaoko ako.
4. Yedu yakajeka uye inobatsira katsi nzwara yezvipikiri yakagadzirirwa zvipuka zvidiki. Zvakare, inogona kutakurwa nyore nyore chero kwaunofamba.
Stainless Simbi katsi nzara yekucheka
Iwo ekucheka mashizha anoshandiswa kugadzira katsi yedu chipikiri clipper inogadzirwa nesimbi isina simbi simbi yekuona kuti yakasimba uye inoshandiswazve kwemakore anouya.
Isimbi isina tsvina katsi yekucheka yakavezwa nemabhande erabha iyo inodzivirira kutsvedza kana iwe uchicheka.
Nepo isina simbi katsi nzara yekuchekedza inosarudzwa nehunyanzvi vachengeti, iwo zvakare akakosha kune ezuva nezuva imbwa & varidzi vekati. Shandisa iri diki simbi isina tsvina katsi chipikiri chekucheka kuchengetedza zvipikiri zvechipfuwo chako zvine hutano.
Diki Katsi Nail Clipper
Yedu akareruka zvipikiri zvipikiri zvakagadzirirwa kushandiswa pane zvidiki mhuka, senge imbwa diki, katsi netsuro.
Iyo diki yekatsi nzara clipper inogadzirwa nesimbi isina simbi saka iri hypoallergenic uye yakasimba.
Iyo diki yekatsi mbambo yekucheka mubato yapera neyakagadzika-chiratidzo chekupfeka, Iyo inokutendera iwe kuti uchengetedze uye zvakanaka kunyatsovabata ivo kuitira kudzivirira njodzi dzinorwadza.
Nyanzvi yekatsi chipikiri chigero
Iyo nyanzvi katsi chipikiri chigero chakaiswa ergonomically chakagadzirwa neshangu-yakapinza simbi isina simbi semi-yakatenderera angled blade. Iwe unozogona kuona zvauri kuita uye nekukubatsira iwe kuona kuti yakawanda sei yaunoda, inodzivirira reropa tsvina kunyangwe isina yekukurumidza sensor.
Iyo nyanzvi katsi nzara chigero chinogadzikana uye chisina-kutsvedza inobata Iyo inovimbisa nyore kushandisa uye kudzivirira netsaona nicks uye kucheka.
Uchishandisa iyi nyanzvi katsi nzara chigero uye cheka nzara dzemwana wako mudiki, zvipikiri, zvakachengeteka uye zvine hunyanzvi.
Pet Nail Scissor Kune Yakakura Imbwa
1. Chipikiri chipikiri chigero chembwa hombe zvinoshamisa kuti chiri nyore kushandisa, iyo yakatemwa yakachena uye yakanyatsojeka, uye ivo vanocheka vakananga kuburikidza nekumanikidza kushoma.
2. Mashizha pane ino clipper anogona 't kukombama, kukwenya kana ngura, uye kunogara kwakapinza mushure mekubvarurwa, kunyangwe imbwa yako ine zvipikiri zvakaomarara. Chipikiri chipikiri chigeso chembwa hombe chine mhando yakanaka kwazvo inorema-basa simbi isina waya, iyo ichapa yakasimba uye inogara kwenguva refu yakapinza yekucheka chiitiko.
3. Iwo asingatsvedzi anobata akasununguka kubata. Iyo inodzivirira iyo pet chipikiri chigero chembwa hombe kutsvedza-kumusoro.
Pet Chipikiri Clipper Uye Trimmer
1.Pet Nail Clipper Uye Trimmer ine yakashinga chitubu-yakatakurwa clipping mashandiro eanonyanya kushanda ekucheka chiito.
2. Iko rekuchengetedza, gadzira chipikiri chipikiri clipper uye cheka mune yakavharika mamiriro kana isiri kushandiswa.
3. Irgonomic grip yakagadzirirwa kuumbika ergonomic kutenderedza ruoko rwako kuitira nyaradzo yakareruka uye nyore kushandisa kunobatsira kudzivirira netsaona kucheka. Ingozvibata zvakajairika paunenge uchimanikidza.
4.Kana ivo vasiri kushandiswa, Pet Nail Clipper Uye Trimmer inogona kukiyiwa nemabhureki munzvimbo yakavharwa. Iwe hauzongozvitema netsaona kana uchiiburitsa mudhirowa.